Inona ny fizahantany fihazana? | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | soso-kevitra, Toerana fitsangatsanganana
Fantatrao ve izany fizahan-tany fihazana? Sarotra ny hamintina io anarana io fa raha miresaka biby sy lehilahy aho… dia azonao ve izany?
Fizahan-tany mihaza dia fizahan-tany fihazana. Angamba tsy izy no malaza indrindra ankehitriny na ilay manana mpanao gazety tsara indrindra, raha ny marina dia tsy mahafinaritra ny fahafatesana, fa ny tena izy dia misy ary misy faritra maro eto an-tany manolotra azy ary miaina eo amboniny.
1 Fizahan-tany mihaza
2 Toerana fanaovana fizahantany mihaza
3 Fizahan-tany mihaza any Espana
Io no anaran'ny fizahan-tany izay mihodina amin'ny fihazana ary mampihetsi-po olona an'arivony, maro amin'izy ireo manankarena, manerantany. Ara-dalàna izany ary ireo izay mampihatra izany dia tsy maintsy manaraka ny lalàna sy ny fenitra mandinika azy.
Mazava ho azy fa misy hatrany ireo mandika lalàna sy mamono biby an'ny karazam-biby voaaro na manao azy tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana, saingy efa meloka izany. Rehefa atao ara-dalàna ny fizahantany manampy amin'ny fitehirizana ny karazany sy ny fahaveloman'ny vondrom-piarahamonina amin'ireny faritra ireny.
Fizahan-tany mihaza manerana an'izao tontolo izao noho izany dia hitantsika izany avy tany Etazonia, namakivaky an'i Amerika atsimo sy Espana ka hatrany Kroasia. Angamba manana safari ianao any Afrika kokoa ao an-tsainao fa ho hitanao izany fihazana fanatanjahan-tena izany, izay aorinan'izany rehetra izany dia mitranga amin'ny toerana rehetra.
Misy fotodrafitrasa fizahan-tany mihaza tokoa izay mikarakara ny lozisialy, fahazoan-dàlana ary ny zava-drehetra dia eo amin'ny sehatry ny faharetana fa tsy atahorana. Nilaza ireo manampahaizana manokana fa ny fihazana dia voajanahary amin'ny toetrantsika ary misy ny hakantony sy ny fahaizana manokana ao aminy hamelana azy eo amin'ny tratran'ny tantara tsy ho ela.
Ny World Tourism Organization dia mihevitra ny fizahan-tany mihaza ao anatin'ny fizahan-tany ara-panatanjahantena ary manasongadina ny faharetan'ny tontolo iainana izy io, toy ny amin'ny fizahan-tany hafa, ny olona dia mifandray mivantana amin'ny natiora.
Tsy ny mandeha an-tongotra sy mividy fahatsiarovana izany ka tsy ny olona rehetra no manam-bola izay tiana holazaina amin'ity fanatanjahan-tena ity. Indrindra raha haza lambo lalao lehibe ny lalaonao ary tsy maintsy mandeha aty Afrika ianao… Fa amin'ny ambaratonga kely na amin'ny ambaratonga bitika dia fanatanjahantena azo ampiharina any amin'ny faritany, ambanivohitra na firenena mitokana maro manerantany.
eto ny zava-dehibe dia ny fisian'ny Fanjakana raha resaka fitsipika satria fantatsika fa raha tsy nanao fanelanelanana izy dia izay hitranga taloha no hitranga: ny fanjavonan'ny karazana tanteraka. Amin'ny fihazana fanatanjahantena voafehy dia ny mifanohitra amin'izay no vokany matetika ampiasaina hifehezana ny isan'ny karazana sasany fa raha mihoatra ny isa iray dia hanafika ny hafa izy ireo.
Ny fisian'ny Fanjakana dia mazava ho azy avy alalana, ny fanitsiana ny vanim-potoana fihazana, alàlana sy fifehezana ireo orinasa manolotra ity serivisy fizahantany mihaza ity.
ankapobeny fizahan-tany fizahan-tany dia mizara ho lalao kely, lalao lehibe sy lalao rano. Ny roa voalohany dia manondro ny haben'ny tohodrano ary ny faharoa amin'ny tontolo iainana izay anaovana azy. Ny lalao kely dia misy bitro, domohina na zana-boromailala, ohatra. Ny lalao lehibe dia misy lambo, dia, sy fihazana anaty rano ny riandrano webbed sy wader.
Etsy ankilany manana isika tsena iray natsangana indrindra ho an'ny mpizahatany manana vola be, mitaky onenana sy serivisy, iray hafa ho an'ny mpihaza fanatanjahan-tena manokana ary fahatelo manasa-tsy fampahalalana.
Ireo mpihaza fanatanjahan-tena manokana matetika dia mifindra amin'ny vondrona voafantina izay mandeha amin'ny toerana voafantina amin'ny fikarohana karazana voafantina. Ny vondrona farany dia tsy manana vola be na be fangatahana ary matetika izy ireo dia tsy manakarama vondrona mpizahatany ary mihetsika samirery.
Toerana fanaovana fizahantany mihaza
Any Afrika, mazava ho azy. Ity kaontinanta midadasika sy manankarena ity no tanjona voalohany tonga ao an-tsaina ary misy antony marim-pototra. Misy firenena afrikanina manana tahiry biby ary izy ireo ihany no mandamina safaris izay mety ho fihazana, lafo kokoa sy manokana, mora vidy ary tsotra kokoa. Indraindray izy ireo dia mihaza ary amin'ny fotoana hafa dia fizahan-tany mijery vorona fotsiny izany.
Miresaka momba ny Tanzania, Kamerona, Namibia. Ny liona, elefanta, gazela, buffalo, voay, antelope no resahiko. Indraindray dia misy fampiharana ny fanatanjahan-tena ary indraindray mianatra izany miaraka amin'ny mpitarika manokana. Ny fahazoan-dàlana dia tsy maintsy alamina ary avy eo mifikitra amin'ny vola azo hazaina na ny andro voatondro hanaovana ilay haza lambo.
Miala amin'i Afrika Arzantina Any Amerika atsimo dia nanjary fizahan-tany fizahan-tany nandritra ny fotoana kelikely. Ny Pampas sy atsimon'i Patagonia dia manolotra ny azy ireo miaraka amin'ny lambo, buffalo, voromailala, gana, osy, pumas na antilopa. Bebe kokoa amin'ny avaratra México manolotra ny fihazana ny jaguar ary raha manohy miakatra isika dia Kanada sy Etazonia.
Orsa, moose goavambe, amboadia, ary ombidia amerikana no tena ankafiziny any Amerika Avaratra ary bebe kokoa ao Alaska bera polar sy tombo-kase kely nozazaina. Raha ny marina dia nomen'i Kanada alalana hihaza zanak'ondry sy lynxes mihoatra ny telo alina tsy misy mihetsika volo.
Ao amin'ny faritr'i Azia Pasifika ny natiora mahafinaritra an'ny Nouvelle Zélande sy Aostralia Nanjary toeram-pizahan-tany fihazana ihany koa izy io ary manao diabe any ny mpihaza mitady cheetah na serfa eo an-toerana.
Fizahan-tany mihaza any Espana
Manana tantara maro ny fihazana satria ny fizotran'ny toetrany sy ny jeografia misy azy dia samy manana ny tontolo iainan'izy ireo, samy manana ny karazany avy. Matanjaka manokana izany any ambanivohitra, faritra vitsy mponina noho ny fifindra-monina mankany amin'ny tanàna.
Ny faritra sasany dia nitodika tany amin'ny fihazana mpizahatany maharitra ary ny valiny dia tsara satria novelomina indray ny karazany fa ny fihazana tsy an-kanavaka taonjato lasa teo dia saika nahatonga azy ireo hanjavona. Inona koa loharanom-bola, mamokatra asa mivantana mihoatra ny dimy arivo ary mampihetsika manodidina ny 240 tapitrisa euro, any Castilla-La Mancha ihany, ohatra.
Misy karazana fihazana fanatanjahan-tena isan-karazany: filats, parany ary alika ary ferret, counter, silvestrismo, skipping, misy tsipika, boribory, omby sy lefona. Samy nanambara fomba fiasa samy hafa izy ireo mba hihaza sy hisamborana ny rembiny (fandrika amin'ny hazo, harato na biby toy ny alika, ferrets na vorona voaofana ho amin'izany tanjona izany, basim-borona, zana-ketsa).
Raha fintinina dia izany no atao hoe fizahan-tany fihazana: haza, mpihaza, dia, fialofana, adrenaline ao amin'ny lalan-drà sy amboara. Na matory ao anaty lay tsotra tsy misy trano fidiovana, any amin'ny trano mahaliana, amin'ny hotely, trano na amin'ny toby mihaja eo ambanin'ny kintan'i Afrika, ny fanahy mihaza taloha no mampiray ireo mpizahatany ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » soso-kevitra » Inona ny fizahantany fihazana?
manuel sarracino sarracino dia hoy izy:
Mahafinaritra ireo sary
Mamaly an'i manuel sarracino sarracino
wide dia hoy izy:
Ny fizahantany fizahan-tany dia tokony hovonoina ary heverina ho toy ny heloka bevava.
Tena fahatezerana ny hoe mitohy izao asa ratsy izao.
Valiny amin'ny wided